Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) Brain Brain (37758-47-7) Mpanamboatra - Phcoker
Ny vovony GM1 dia be mpampiasa amin'ny fitsaboana ratra amin'ny ati-doha hypoxic-ischemic neonatal, ny aretin'i Parkinson… ..
Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) ati-kisoa (37758-47-7), ny anarana fohy dia mety ho GM1, nalaina avy amin'ny ati-kisoa ary mpikambana ao amin'ny andiany ganglio gangliosides izay misy reside asidra sialic iray.
Anarana simika Sodium monosialotetrahexosylganglioside (ati-porcine)
Habaka Mikrobia Ny totalin'ny bakteria aerobika dia tokony <100cfu / g, ary ny totalin'ny bobongolo sy ny masirasira dia tokony <50cfu / g
GM1 dia afaka mampiroborobo ny fanarenana ny fiasan'ny neurolojia aorian'ny ratra amin'ny rafi-pitabatabana afovoany amin'ny antony maro samihafa, mampiroborobo ny neuroplasticity. Ny fanandramana dia mampiseho ny ratra amin'ny ati-doha vovoka GM1, ny ati-doha mampijaly mba hamerenana amin'ny laoniny ny sela nerveuse amin'ny ratra amin'ny hazondamosina dia misy fiantraikany miaro ary mampiroborobo ny anjara asan'ny sela.
GM1 (monosialotetrahexosylganglioside) ny ganglioside "prototype", dia mpikambana ao amin'ny andiany ganglio misy gangliosides izay misy residu asidra sialic iray. GM1 dia manana toetra ara-batana manan-danja ary misy fiantraikany amin'ny plastika sy ny rafitra fanarenana neuronal, ary ny famotsorana ireo neurotrophins ao amin'ny ati-doha. Ankoatry ny asany amin'ny fisiolojian'ny ati-doha, ny GM1 dia toerana ifamatorana ho an'ny cholera poizina sy ny E. coli heat-labile enterotoxin (fivalanan'ny Traveller).
Ny zava-mahadomelina dia natolotra tamin'ny fatra 20-40 mg isan'andro tamin'ny tsindrona intravena na tsimoramora intramuscular araka ny torohevitry ny dokotera. Amin'ny dingan'ny fiovana mahery vaika: ny rongony dia nampiasaina tamin'ny fatra 100 mg isan'andro tamin'ny tsindrona intravenous; Rehefa afaka 2-3 herinandro dia tazomy amin'ny ankapobeny ny habetsaky ny 20-40 mg isan'andro mandritra ny enina herinandro, ny fatra voalohany 500-1000 mg dia notontosain'ny tsiranoka intravenous ho an'ny aretin'i Parkinson; hatramin'ny andro faharoa, ny zava-mahadomelina dia nampiasaina tamin'ny fatra 200 mg isan'andro tamin'ny alàlan'ny subcutaneel, tsindrona intramuscular na fitetezana intravenous mandritra ny 18 herinandro matetika. raha ity fanafody ity dia notantanan'ny tsindrona Subcutaneau na intravenous, dia tokony halefa sy notampohan-drano amin'ny tsindrona mandra-pahatongan'ny fatran'ny 10 mg / ml ao amin'ny; rehefa nitete intravenous, dia tsy nankasitrahana ilay fanafody ary notampohina tamin'ny tsindrona sodium klôrozy 0.9% na 5% tsindrona glucose